Otu esi etinye qBittorrent kacha ọhụrụ na desktọpụ Ubuntu 20.04 na nkesa - LinuxCapable
Otu esi etinye qBittorrent kacha ọhụrụ na desktọpụ Ubuntu 20.04 na sava
Fraịde, Septemba 3, 2021 Monday, August 2, 2021 by Jọshụa James
Wụnye qBittorrent na Desktọpụ Ubuntu 20.04 site na PPA
Wụnye qBittorrent na Ubuntu 20.04 Server site na PPA
Ịnweta qBittorrent Web UI na Ubuntu Server
qBittorrent bụ cross-ikpo okwu efu na-emeghe-isi BitTorrent ahịa. qBittorrent bụ ngwa ala nke edere na C + nke na-eji Boost, Qt 5 Toolkit, yana ọba akwụkwọ libtorrent-rasterbar ma dị oke fechaa yana ngwa ngwa. qBittorrent bụ ewu ewu nke ukwuu n'etiti ndị ọrụ iyi dị ka isi ihe ọzọ UTORrent.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye qBittorrent na Ubuntu 20.04 na 21.04.
Site na ndabara, qBittorrent agụnyere na ndabara Ubuntu ebe nchekwa software. Agbanyeghị, dị ka ọtụtụ ngwungwu, nke a na-abụkarị nke oge maka njirimara ọhụrụ yana nkwalite ahụhụ. Ọ bụrụ na ị na-eji qBittorrent, ị na-akwado nke ukwuu iji PPA kwadoro site na otu qBittorrent.
Mbụ, mepee gị Ubuntu Ọnụ (Ctrl+ALT+T) ma wụnye PPA site na iwu a:
Iwu ọnụ ọnụ dị n'elu ga-agbakwunye ya ozugbo PPA ebe nchekwa ma melite ndepụta nchekwa gị maka ọtụ nchekwa.
Ugbu a ị nwere ike ịwụnye qBittorrent na-eji iwu a:
A ga-etinye ngwungwu ndị a yana qBittorrent:
ụdị (NA) ma pịa Tinye igodo iji gaba n'ihu ma mechaa nrụnye.
Naanị otu okwu ndetu, na PPA na-arụkwa ọrụ na ndị ọzọ Linux nkesa dabere na Ubuntu, dị ka Mint Linux na Osiso os. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị wụnyere qBittorrent ugbua, ụdị ochie, ị nwere ike tinye ya n'enweghị nsogbu PPA, nke ga-emelite ngwanro gị ka ọ bụrụ ihe nrụpụta kacha ọhụrụ. Ịkwesighi ịkwado iyi gị na-eme nke a, ọ ga-adịkwa mma dịka nkwalite ọ bụla. Naanị ihe ị na-eme bụ ịgbanwee ebe nchekwa na imelite ngwanrọ.
Ka ịmalite qBittorrent, pịnye iwu na-esonụ na gị Ubuntu Ọnụ:
Iji mee qBittorrent n'azụ ọdụ ọdụ gị, jiri iwu a:
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịchọta mmemme na nke gị Ubuntu Desktop Ngwa Menu.
Na mbụ-oge ojiji nke mmemme, ị ga-enweta a mmapụta window na a Nkpuru iwu. Nke a na-ekpuchi qBittorrent si ọrụ iwu dị ka ọtụtụ mara na iyi ka bụ akụkụ bụ isi nke nbudata iwu na-akwadoghị taa.
Mgbe ikwenye na Nkpuru iwu, ị ga-ahụ mpio iyi software arụnyere ọhụrụ na-egosi dị ka n'okpuru:
qBittorrent enwere ike itinye ya na enweghị isi Ihe nkesa Ubuntu na jikwaa ngwa ngwa na interface WebUI enwetara site na ihe nchọgharị ịntanetị kachasị amasị gị.
Mbụ, tinye ya PPA ma melite dị ka ebe nchekwa gị:
Ọzọ, ị ga-etinye ugbu a qBittorrent ahịa (qbittorent-nox) kama (qbittorent ) site na iwu a:
qBittorrent-nox bụ ihe ndabara maka ndị ahịa na-enweghị isi emebere ka ọ na-aga site na interface Weebụ enwere na ọnọdụ localhost ndabara na http://localhost:8080. A na-echekwa ohere UI Weebụ site na ndabara, yana aha njirimara akaụntụ ndabara bụ (ha), na paswọọdụ bụ (adminadmin).
N'adịghị ka ụdị desktọpụ, na-eji iwu ọnụ (qbittorrent-nox) agaghị enye ndụmọdụ dị ka ihe nkesa na-enweghị isi; ị gaghị enwe ike ime ihe ọ bụla mgbe qBittorrent na-agba ọsọ, nke na-abaghị uru. Kama, ị ga-emepụta a systemd Ngalaba ọrụ iji na-agba n'azụ wee malite na buut sistemụ.
Mbụ, mepụta (qbittorrent-nox) onye ọrụ na otu ka ọrụ ahụ wee na-agba ọsọ dị ka onye ọrụ enweghị ohere.
Mara, ọ bụrụ na ị na-eche ihe (-usoro) pụtara, ị mepụtara onye ọrụ sistemụ kama ịbụ onye ọrụ nkịtị.
Ọzọ, tinye aha njirimara gị na qbittorrent-nox otu onye ọrụ:
Nke abụọ, mepụta a systemd faịlụ ọrụ maka qbittorrent-nox:
Nke atọ, ịkwesịrị idetuo na mado ahịrị ndị a n'ime faịlụ ahụ.
Chekwaa faịlụ (Ctrl+O), wee pụọ (CTRL+X). Ugbu a, bugharịa daemon sistemụ gị maka mgbanwe ga-arụ ọrụ:
Ugbu a ị nwere ike ịmalite qBittorrent-nox jiri iwu a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ qBittorrent-nox ka ịmalite na buut, jiri ihe ndị a:
Tupu ịga n'ihu, ọ ga-adị mma maka ịlele ọkwa ahụ iji jide n'aka na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma:
Ọ bụrụ na enweghị njehie na ọkwa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gaba n'akụkụ nke ọzọ nke nkuzi.
qBittorrent enwere ike ịnweta site na ihe nchọgharị ịntanetị kachasị amasị gị na UI Weebụ ya site na netwọk mpaghara gị. Iji mee ụdị a, adreesị IP nke ihe nkesa na-esochi nọmba ọdụ ụgbọ mmiri (8080), ọmụmaatụ, 192.168.55.156: 8080, ma ọ bụ jiri ọ bụrụ na akwadoro ya na mpaghara, jiri adreesị localhost 127.0.0.1: 8080.
Ị ga-ahụ peeji na-esonụ:
Ndabara aha njirimara is (onye nchịkwa), na ndabara password is (adminadmin).
Ozugbo ịbanye, ngwa ga-amalite dị ka n'okpuru:
Tupu ime ihe ọ bụla ọzọ, i kwesịrị gbanwee ozugbo na aha njirimara nke ndabara na paswọọdụ, nke nwere ike ịchọta na-eso ụzọ:
Ngwaọrụ > Nhọrọ > Weebụ UI > Nyocha.
Ị nwere ike ịgbanwe aha njirimara na paswọọdụ. Ọmụmaatụ n'okpuru:
Ekele, ị tinyela qBittorrent na sava Ubuntu gị.
Ka ịlele maka mmelite na itinye, ihe niile ị ga-eme bụ ịgba ọsọ iwu mmelite dabara adaba dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na mmelite dị maka qBittorrent or qBittorent-nox, jiri ihe ndị a:
Ọ bụrụ na ị ga-achọ iwepụ qBittorrent, nke a bụ usoro dị mfe. Mbụ, ị ga-ewepụrịrị omenala PPA ma ọ bụrụ na ị wụnye a dị ka kwa nkuzi n'elu.
Wepụ ya PPA arụnyere na iwu a:
Na-esote, wepụ qBittorrent iji iwu dị n'okpuru:
Ma nke ahụ bụ ya; megharịa nkuzi ka ịwụnye qBittorrent ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya laghachi na sistemụ Ubuntu 20.04 gị.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ịwụnye ụdị kachasị ọhụrụ, nke kachasị ọhụrụ qBittorrent na ha abụọ Desktop na Server nsụgharị nke Ubuntu 20.04 na ọhụrụ 21.04 Hirsute sistemụ arụmọrụ. N'ozuzu, qBittorrent bụ nhọrọ siri ike ma ọ bụrụ na ị na-eji iyi iyi Linux na sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Ọ na-abịa na atụmatụ karịa nke ọdịnala dị fechaa nnyefe ma ọ bụ onye ahịa sọftụwia iyi yiri ya, na-enweghị oke okpomoku yana adware na-agba dị ka Ebughachi.
Wụnye UNRAR na Ubuntu 20.04 LTS
Categories Ubuntu Tags qBittorrent, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye asụsụ mmemme Swift na Ubuntu 20.04
Satọde, Ọgọst 7, 2021 6:13 nke ụtụtụ
Daalụ maka enyemaka. Echere m na nke a bụ ngwa iyi kacha mma na ubuntu.
Zaa Ibnul Alam
Tọzdee, Ọgọst 12, 2021 6:40 nke ụtụtụ
Enweghị ike ikwenye karịa, anwalela m ole na ole ma m na-alaghachi mgbe niile na qBittorrent ọ bụrụ na Linux, Mac ma ọ bụ Windows.
Sọnde, Ọktoba 31, 2021 3:05 nke ụtụtụ
Ndewo, mgbe m mepụtara onye ọrụ qbittorrent-nox ọ nweghị ohere ịnweta mbanye mpụga nke etinyere n'okpuru akaụntụ m. Kedu ihe m ga-eme maka ya?
Sọnde, Ọktoba 31, 2021 2:24 nke abalị
Daalụ maka ozi Jakub,
Ị nwere ike ịtọ ikike site na chown, ma jiri aha njirimara ma ọ bụ otu dabere n'ihe masịrị gị.
sudo chown -R qbittorrent-nox:qbittorrent-nox / ndekọ / ebe ma ọ bụ ndị ọzọ dị ka
sudo chown -R qbittorrent-nox: mgbọrọgwụ / directory/location
Enwere ike ime ya n'ụdị dị iche iche.